रविले गरे यस्तो साहस ! देशको सीमा मिचियो,सिधाकुरा बिरगंज सीमाबाट लाइभ…. - www.kchhakhabar.com
रविले गरे यस्तो साहस ! देशको सीमा मिचियो,सिधाकुरा बिरगंज सीमाबाट लाइभ….
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ०५, २०७४ समय: १५:२०:०६
निर्माणाधीन सीमा स्तम्भसँगै नेपाली भूमी पनि घट्दै भारत नेपालको नजिकको छिमेकी राष्ट्र । नेपालका २६ जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएका छन् । १८८० किलोमिटर लामो जमीन भारतीय सीमासँग जोडिएको छ । २६ जिल्ला मध्ये २३ जिल्लाका ७१ भन्दा बडि भुभाग भारतीय पक्षबाट मिचिएको छ । हामी वीरगंज महानगरपालिका १ छप्कैयामा पूग्दा सीमा स्तम्भ निमार्णका क्रममा आफ्नो नम्बर जग्गा मिचिएका स्थानिएहरु हातमा लालपुर्जा बोकेर बन्दै गरेका स्तम्भ हेरेर बसेका थिए । उनिहरुले स्तम्भ निमार्ण गर्ने पुगेका सरोकारवालासँग प्रतिवाद गर्न खोज्दा लालपुर्जा लगाएतका कागज माथी पठाउनु पर्छ भन्दै मागे र स्तम्भ राखे ।
सरोकारवालाहरुले २ देशको पहिलेको सहमति अनुसारनै स्तम्भहरु निर्माण गरेको बताएपनि अहिले सिमा स्तम्भको लागि खनिएका खाडल र सार्वजनिक संरचनाहरु सँगै छन् ।नयाँ स्तम्भबाट पहिले बनेका सबै संरचना दशगजा भित्र पर्छन । सिरिसिरा खोला सरेसँगै नेपाल र भारतको सिमाना पनि सर्दै सर्दै नेपाल तर्फ आउँछ । अर्थात नेपालको क्षेत्रफल घट्छ र भारतको बढ्छ । सिरिसिरा खोलासँगै सर्दै आएका नेपाली अहिलेकै अवस्थामा यी स्तम्भहरु निर्माण भए दशगजा क्षेत्रमा पर्ने छन् र ढुङगो छैन कहाँ पुग्नु पर्ने हो ?
सीमा स्तम्भ राख्ने क्रममा नेपालको भुभाग भारत तर्फ गएको सुचना पुगेको पछि शसस्त्र प्रहरीको टोली घटना स्थलको सुरक्षाको लागि खटिएको छ । दुई देशबिच सीमामा हरेक बर्ष सिर्जना हुने समस्या सरकारबाट दिर्घकालीन रुपमानै हुनुपर्छ । देश देश विच हुने सन्धी र सम्झौता प्रतेक नागरीकको हितका लागि हुनुपर्छ । दुई देशविचको राजनीतिक खिचातानीको शिकार बर्षौदेखी विना बर्दीका सिपाइ भएरु सीमा रक्षा गरीरहेको नागरीकलाई बनाइनु हुँदैन । नेपाल–भारत सीमा विवाद सम्बन्धी स्थलगत रिपोर्टिङका लागि वीरगन्ज छपकैयामा सिधाकुरा टिम ,,,,,,,,,,,,,,,,, वीरगन्जस्थीत नेपाल भारत सीमामा सीमा स्तम्भ निमार्णका गर्ने क्रममा ५० बिघा नेपाली भुभाग भारत तर्फ पर्न गएपछि स्थानिय जग्गा धनी मात्रा होइन सिंगो नेपालको ध्यान आकर्षण भएको छ ।
हामी यो वीरगंज छप्कैया बजार पुगेर स्थानियहरुसँग यो बिषयमा छलफल ग¥यौँ । आफ्नै जग्गा भारत तर्फ भन्दा बढी चिन्ता देशको सीमा खुम्चीएको मा थियो उनिहरुको ।आँखै अगाडी जंगे पिल्लर र सहायक पिल्लर नेपालतर्फ सार्दा पनि नेपाल सरकार चुप लाग्दाको आक्रोस उनिहरुको मुहार स्पष्ट थियो । नेपाल –भारत सीमासँगै बगेको सिरिसिया खोलाको धार परिवर्तन भएसँगै भारतीय पक्षले सीमा स्तम्भ राख्ने स्थान पनि परिवर्तन गरेको स्थानियको दाबी छ ।
उनिहरुका अनुसार सीमा सर्वेक्षण टोलीले साविक स्तम्भभन्दा झन्डै ५० मिटरदेखि एक सय मिटरसम्म नेपालभित्रको भूमीमा नयाँ स्तम्भ राखेको छ । बर्षौ देखि नेपालीले भोगचलन गर्दै आएको यो जग्गा माटोको थुप्रो मात्रै थिएन, सिमानामा हरेक बर्ष भारतको दादागिरी सहेर नेपालको अस्मीता बचाउने स्वाभीमानी भुमी थियो । तर नेपाल भारत संयुतm सीमा सर्वेक्षण टोलिले नै नेपाललाई अन्याय हुने गरी निमार्ण गर्न लागेको छ । २०२२ सालको नापीका बेलादेखि नै बजार छप्कैयाँका बासिन्दाको नाममा रहेको जग्गामा अहिले टोलीले स्तम्भ राखिरहेको छ ।
सिरिसिया खोला पारी पनि नेपालीको जग्गा छ, नेपाली भुमी छ । नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापनका लागि बजार छप्कैयामा पर्ने मूल स्तम्भ (जंगे पिलर) ३९१ को ३८ र ३९ तथा ३९२ को ७, ८, ९, १०, २७ र २८ नम्बरको सहायक स्तम्भ नेपाली भूभागमा परेका छन् । पुस्तौंदेखि लालपुर्जा बोकेर, कर तिरेर भोगचलन गर्दै आएको नम्बरी जग्गा गुमाउनुपर्दा राज्यले नै आँफुहरुलाई अन्याय गरेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।नेपाली भुमी आँखै अगाडी भारतको भएको सहन नसकेर विरोध गर्न खोज्दा नेपाली प्रतिनिधीहरुले देश विरोधी कार्य हुने भन्दै रोके उनिहरुको गुनासो छ ।
नेपाली भुभाग बचाउन खोज्दा देश विरोधी हुन्छ भन्नेहरुले नै देशको माटो बेचिरहेका उनिहरुको आक्रोस छ । यसपछि हामीले यो सर्भेमा सहभागी नेपाल सरकारकार। प्रतिनिधीहरुसँग सम्पर्क ग¥यौँ । उनिहरुले दुवै देशको सहमतिअनुसार नक्सांकनको काम भएकाले यसमा भारततर्फका जग्गा पनि नेपाली भूभागमा परेको दाबी गरे । यो बिषयमा जिल्ला प्रसासन कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले ‘१८४० को नक्साअनुसार सीमामा स्तम्भ राख्ने कार्य भइरहेको दाबी गरे । साथै नेपालतर्फका टोली प्रमुखलाई समस्याबारे जानकारी गराएकाले ‘टोली प्रमुख वीरगन्ज आएपछि सरोकारवाला निकायलाई राखेर स्थलगत निरिक्षण गर्ने जनाए । पुरा जानकारीको लागी भिडियो हेर्नुहोस,,,,,,, -न्युज २४ बाट